ရေလိုအပ်သော ကျေးရွာများတွင် ရေတုံကင်တွင်းများ တူးဖော် ဆောင်ရွက်ပေး – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရေလိုအပ်သော ကျေးရွာများတွင် ရေတုံကင်တွင်းများ တူးဖော် ဆောင်ရွက်ပေး
August 30, 2016 USDP 20160Comment
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကြံခင်းမြို့နယ် ရေလယ်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၊ ရေဘေးဒဏ်ကြောင့် ရေလိုအပ်သည့်နေရာများအား မြို့နယ်ပါတီကော်မတီ နှင့် ရပ်/ကျေးပါတီဝင်များ စုပေါင်းလှူဒါန်းမှု၊ စေတနာရှုပြည်သူများမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ဖြင့် ရေတုံကင်တွင်းများ တူးဖော်၍ ရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
← ကြံခင်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကော်မတီဝင်များ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ဘက်စုံသုံးရေကန်ဖွင့်ပွဲ တက်ရောက်
ဗဟိုနာယကအဖွဲ့ဝင် ဦးဌေးဦးနှင့် ဇနီး လှူဖွယ်ဝတ္ထုများနှင့် ဆန်အိတ်များ လှူဒါန်း →
THE UNION SOLDARITY AND DEVELOPMENT PARTY STATEMENT NO. (3/2019) 1 Waxing Of Waso , 1381 ME 2nd July , 2019
July 4, 2019 USDP 2016 Comments Off on THE UNION SOLDARITY AND DEVELOPMENT PARTY STATEMENT NO. (3/2019) 1 Waxing Of Waso , 1381 ME 2nd July , 2019
ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီိမှ လစဉ်ပုံမှန် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်
January 15, 2019 USDP 2016 Comments Off on ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီိမှ လစဉ်ပုံမှန် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်